Haweenka Wax badan Oo aan laga filaneen malagu arkaa ! - iftineducation.com
iftineducation.com – Su’aashaan hadaad weydiiso qof dumar ah lagama yaabo intooda badan in ay si sax ah kaaga jawaabaan, qaarkood waxaa ay kuusheegayaan in arintaasi aysan ahayn wax jira balse qaar yar ayaa ku dhahaya arintaani waa jirtaa balse iyaguna sharaxaad kama siinayaan sidaa daraadeed Wacdaraha.com ayaa sharaxaysa qabso oo dhakab dheh waayo cilmigu ceeb waa kadhanyahay.
Dumarku waa biyo baxaan balse biyo baxa dag daga ah ee dumarka ayaa ah in Biyo jilicsan oo cadaan xigeen ah ay ka yimaadaan kuwaasi oo marka ay soobaxayaan an lahayn wax dareen raaxa ah.Dumarka qaar xiliga biyahaasi kaadi caadi ah ayaa ka timaada. Maxaa keena Biya baxaas dag daga ah?
Waxaa sababa halka Looyaqaano point G oo ah meesha ay dareenka kaqaataan dumarka ayaa qanjiro ku yaala ay cadaadismaan kadibna waxaa soo daadanaya dhacaankaasi.
Halka qaarkale oo dumarka kamid ahna ay sabab u tahay marka ay dareento wax oo meesha(kintirka)looyaqaano ay sababto in dareerahaasi yimaado.
RIIX HALKAN NALA DAAWO MUUQAALKA: